Khayaanada Halista ah ee Ka Fogaanshaha Shabakada Bulshada | Martech Zone
Waxaan ka fekerayay magacaabista boostadan, Waa maxay sababta Jonathan Salem Baskin uu u qaldan yahay… Laakiin dhab ahaan waan ku raacsanahay isaga qodobo badan oo ku saabsan qoraalkiisa, Khayaanada Khatarta ah ee Baraha Bulshada. Waan ku raacsanahay, tusaale ahaan, in baraha bulshada ay inta badan isku dayaan inay ku riixaan ganacsiyada inay ka faa'iideystaan ​​warbaahinta iyaga oo aan si buuxda u fahmin dhaqanka ama ilaha shirkadda ay la shaqeynayaan. Ma noqon karto wax lala yaabo, in kastoo. Waxay isku dayayaan inay iibiyaan shey… la talin u gaar ah!
Kuma raacsani Mudane Baskin dhowr dhibcood, in kastoo:
Ereyga duufsi khatar ah waxay muujineysaa sawir xun oo ka mid ah shabakada bulshada oo burburineysa shirkad. Xaqiiqdu waxay tahay, ilaa aad u shaqeysid shirkad iyada oo ay ku hoos jiraan xaalado sharci oo adag, la hadalka iyo dhageysiga macaamiishaada ma aha wax aad u xun sida ay u muuqato. Xaqiiqdii, waa wax aad loo filan karo oo la mahadiyo. Haddii tartankaaga laga heli karo shabakadaha aadan ka jirin in natiijooyinka awooddo halaag noqo. Shirkadaha haysta ilaha iyo habraacyada ay ku maareeyaan sumcadooda khadka tooska ah iyo maaraynta isgaarsiinta waxay heleen shabakadda bulshada labadaba wax ku ool ah oo waxtar u leh wax kasta oo ka yimaada arrimaha adeegga macaamiisha illaa dhismaha maamul ee warshadooda.
The shabakada bulshada ayaa wax walba badashay… In ka badan inta ay suuqleydu jeclaan lahaayeen inay qiraan. Sheegida in aysan noqon doonin wax u dhigma in la yiraahdo ururada shaqaaluhu wax saameyn ah kuma yeelan kacaankii warshadaha. Ka dib oo dhan, khadadka wax soo saarka, wax soo saarka, maareynta iyo shaqaduba wali way wada joogeen, sax? Xuquuqda… laakiin ururada shaqaalaha waxay awood u siisay shaqaalaha inay saameyn ku yeeshaan maamulka iyo mushaarka. Ururada shaqaalaha waxay sameyn karaan ama jebin karaan shirkad… waana leeyihiin. Tani waxay u dhigantaa websaydhka bulshada. Shirkaduhu durba way ka boodayaan tartankooda iyaga oo qaadanaya dhaqanka bulshada; kuwa kalena gadaal ayey uga dhacayaan. Sheegida haddii kale waa mas'uuliyad darro.
Mudane Baskin goboleedyada:
Dadku had iyo jeer waxay lahaayeen sheekooyin ku saabsan noocyada. Intarneedka kahor, waxaa jiray bulshooyin juqraafiyadeed, xirfad, waxbarasho, diin iyo kooxo badan oo bulsheed oo laga yaabo inay ka ballaadhsan yihiin kana iftiimayaan kuwa laga helo internetka, laakiin taa beddelkeed ay ka qoto dheer yihiin oo ay sii jiraan. Hawlahoodu dhab ahaantii waxay ahaayeen kuwo macno ahaan gacanta-ka-taag ah iyo natiijooyinkooduna kuwo nololeed-qeexaaya. Akhlaaqda bulshada kaliya kuma eka tiknoolajiyadda; kaliya waa inaan muuqaal ahaan u aragnaa qaybo ka mid ah sida dadku hadda u sheekaystaan, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan soo dedejino ama kaqeybqaadano howlahaas.
Haa, tani waa run… laakiin arrinta taagan ayaa ah in wada hadaladan ay hadda qayb ka noqonayaan diiwaanka dadweynaha. Waa la tixraaci karaa, la abaabuli karaa oo laga ogaan karaa mashiinka wax raadinta ilbidhiqsiyo gudahood. Dadweynuhuna waxay fiiro gaar ah u yeelanayaan faallooyinka xun iyo dib u eegista ay shirkaddu uruuriso. Safka seegay ee maaraynta arrimaha macaamiisha maalmahan wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa sumcadda shirkadda oo aysan horay u sameyn jirin.
Suuqleyda looma ogola inay ku qarsadaan astaanta, hal ku dhig, iyo sheeko xariir ah mar dambe… suuqleyda ayaa lagu qasbay inay toos ula hadlaan dadka badan. Kaliya waan wada hadli jirnay… hadda waa inaan dhageysanaa oo aan jawaab ka bixinnaa. Wax jawaab ah kama bixin meeshaan bulsheed waxay la mid tahay inaadan daneynin macaamiishaada. Suuqleyda ayaan si sax ah ugu diyaarsaneyn tan… waxayna ku mashquulsan yihiin sidii ay u baran lahaayeen maareynta diidmada, isku xirka, iyo xirfadaha kale oo ka baxsan waxbarashadooda iyo khibradooda.
Saameynta ganacsiyada waa dhab. Shirkaduhu waxay raadinayaan ilo si ay u daboolaan dadaalka loogu baahan yahay kormeerka iyo ka jawaabista shabakada bulshada. Tani waa arrin kale oo la seegay gurus warbaahinta bulshada. Waxay dhayalsadaan ilaha loo baahan yahay si loo daabaco wax ku filan, si dhakhso leh uga jawaabaan, iyo horumarinta hababka loo baahan yahay si buuxda looga faa'iideysto shabakadda bulshada.
Marka, intaan ku raacsanahay gurus shaqo liidata la sameeya hawlwadeennada markay u diyaargaroobayaan websaydhka bulshada, waxaan aaminsanahay in ka fogaanshaha shabakadda bulshadu ay aad uga khatar badan tahay.
Tags: jonathan salem baskinganacsiga warbaahinta bulshadabaraha bulshada waa beenshabakada bulshada
Natiijooyinka Sahaminta Ganacsiga Yaryar ee Facebook